Vakaburitsa hunyanzvi hwekugona kuziva bhurawuza vachishandisa iyo Favicon | Linux Vakapindwa muropa
Vakaburitsa hunyanzvi hwekugona kuziva bhurawuza kuburikidza neFavicon
Chitsva hunyanzvi hunoshandiswa kuratidza chiitiko chebrowser. Maitiro iri pamusoro pekugadziriswa kwemifananidzo maficha eFavicon nerubatsiro rwekuti saiti inoisa zvidhori zvinoratidzwa mumabhukumaki, tabo uye zvimwe zvinhu zvebrowser interface.
Bhurawuza chengetedza iyo Favicon mifananidzo mune yakasarudzika cache, iyo isingawirirane nemamwe macache, yakajairika kune ese modhi ekushanda, uye haina kujekeswa neyakajairika cache uye kubhurawuza nhoroondo vanochenesa.
Basa iri inobvumidza kushandisa chinongedzo kunyangwe uchishanda mu incognito modhi uye zvinoita kuti zviome kubvisa. Kusimbiswa uchishandisa nzira yakatarwa zvakare hakukanganisike nekushandiswa kweVPNs uye ad-anovharira plugins.
Maitiro ekuzivisa anoenderana nekuti padivi revava zvinokwanisika kuona kana mushandisi akambovhura peji nekuongorora ruzivo nezve mutoro weFavicon kana bhurawuza risina kukumbira iwo mufananidzo weFavicon wakatsanangurwa mumatanho epeji. , ipapo peji racho rakatakurwa kare uye mufananidzo unoratidzwa kubva kune cache.
Sezvo lBhurawuza dzinokutendera iwe kumisikidza yako Favicon peji rega rega, ruzivo rwakakosha runogona kusimbwa kuburikidza nekutenderera kwakateerana kubva kumushandisi kuenda kune akawanda akasarudzika mapeji.
Kunyanya kudzoreredza muketani, iwo anowedzera kuzivikanwa anogona kutsanangurwa (huwandu hwezvinotariswa hunotsanangurwa nefomula 2 ^ N, uko N ndiyo nhamba yekudzoreredza). Semuenzaniso, vashandisi vana vanogona kugadzirisa maviri redirects, 4-3, 8-4, 16-10, 1024-24 mamirioni, 16-32 bhiriyoni.
Iko kusarudzika kwenzira iyi ndiko kunonoka kwenguva refu- Iyo yakakwira iko kunyatsoita, zvinotora nguva yakareba kuti ma redirections avhure peji.
32 redirects inogadzira zvitupa zvevashandisi vese veInternet, asi zvichikonzera kunonoka kweanenge masekondi matatu. Kune mamirioni ekuzivisa, kunonoka kunenge sekondi imwe nehafu.
Iyo nzira inosanganisira kushanda nenzira mbiri: kunyora nekuverenga:
Kunyora modhi inogadzira uye inochengetera chiziviso chemushandisi uyo akatanga kuwana saiti.
Kuverenga modhi inoverenga yakambo chengetwa chitupa.
Sarudzo yemodi inoenderana nechikumbiro cheiyo Favicon faira yeiyo huru peji resaiti: kana iwo mufananidzo ukakumbirwa, iyo data haina kuchengetwa uye inogona kufungidzirwa kuti mushandisi anga asati asvika saiti yacho zvisati zvaitika kana izvo zvirimo zvakachengetwa yechinyakare. Sekureva kwevaongorori, nekutsanangudza musoro weHTTP Cache-Control, zvinokwanisika kuzadzikisa iyo Favicon mune cache kwegore rimwe chete.
Mune kuverenga modhi, kana uchivhura saiti, mushandisi akasungwa kumapeji akafanotaurwa neFavicons uye HTTP server inoparadzanisa iyo maFavicons anokumbirwa kubva kuseva uye izvo zvinoratidzwa pasina kuwana iyo server kubva kune cache. Kuvapo kwechikumbiro kwakanyorwa se "0" uye kusavapo se "1". Kuti chinongedzo chichengetedzwe munhare dzinouya, 404 yekukanganisa kodhi inoratidzwa mukupindura zvikumbiro zveFavicon, ndiko kuti, nguva inotevera paunovhura saiti, bhurawuza richaedza kurodha mafavicon aya zvakare.
Mune yekunyora modhi, mune redirect chiuno yemapeji encoding "1", mhinduro chaiyo yeFavicon inodzoserwa, yakaiswa mubrowser cache (kana kutenderera kuchidzokororwa, iyo Favicon dhata ichadzoserwa kubva kune cache, isina kuwana iyo server), uye yemapeji encoding "0" - yekukanganisa kodhi 404 (kana iwe uchidzokorora iyo redirect kutenderera, iyo peji data ichakumbirwa zvakare).
Iyo nzira inoshanda muChannel, Safari, Edge uye zvishoma muFirefox. MuFirefox yeLinux, iko kushandiswa kweFavicons seSupercookies kunokanganiswa nechinhu chinodzivirira bhurawuza kubva pakubata Favicon.
Sezvineiwo, vanyori venzira yekusimbisa vakazivisa vagadziri veFirefox nezve chinhu ichi rinenge gore rapfuura, vachiona kuti paive nechikanganiso mu cache, asi vasingataure nezve basa ravo uye kuti kugadzirisa iko kukanganisa kunotungamira mukukwanisa kuzivikanwa kwemushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vakaburitsa hunyanzvi hwekugona kuziva bhurawuza kuburikidza neFavicon
OSV, sevhisi yegoogle yekudzidza nezve yakavhurika sosi kushushikana